बोट विरुवासँग कुरा गर्नुको मतलव यो होइन की बोट-विरुवा मानिसहरुलाई ‘मलाई खाऊँ भन्थे’ । बरु ती व्यक्तिहरुको सामुन्ने ति बोटविरुवाको विशिष्टता तथा तिनीहरुले के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा यसरी प्रकट हुन्थ्यो कि मानौ उनीहरुले तपाईं सामु केही कुरा बताइरहेका छन् ।
सामान्यतया, कुनै पनि वास्नाले मानिसलाई कसरी र कति हदसम्म आकषिर्त गर्छ भन्ने कुरा मानिसको शरीर र मनको स्तरमा भर पर्ने गर्छ । त्यसैले त, कहिले काहीँ अनायासै हिँडिरहेका बेलामा समेत हामीलाई कुनै वास्नाले अचानक मोहित पार्ने गर्छ । कयौं मानिसको दिमागमा यति धेरै नकारात्मकता भरिएको हुन्छ कि उनीहरुलाई कुनै बास्ना महसुस नै हुँदैन । त्यसैले त भनाई नै छ नि ‘गधालाई चन्दनको वास्नाको महत्वको बारे के थाहा ?’ । किनकी कुनै पनि सटिक बास्ना महसुस गर्नका लागि मानिसलाई एक विशेष किसिमको संवेदनशीलताको आवश्यकता पर्दछ ।
त्यसो त फूल होस् वा अन्य वोटविरुवा । माटो होस् वा जीवन । सबैको आ-आˆनै गन्ध हुन्छ । आ-आˆनै विशेषता हुन्छ । तर त्यसलाई महसुस गर्नका लागि आफूभित्र एक खास किसिमको मधुरता हुन जरुरी छ ।
यसका लागि उनीहरुलाई न त माइक्रोस्कोपको जरुरत पर्‍यो न त कुनै सुक्ष्म अध्ययनकै । बोटविरुवाले विभिन्न माध्यमद्वारा यो कुरा भनेकै कारण हामीलाई यस्ता आर्युवेदिक औषधीबारे थाहा भयो ।
बोटविरुवाले तब बोल्छन्, जब हामीसँग बोल्नका लागि केही पनि हुँदैन र हामी मौन बस्छौ । हामीसँग बोल्नका लागि तबमात्र केही हुन्छ हामी आˆनो अस्तित्वबारे बुझ्छौ । अस्तित्वको सिमाबारे जानकारी हासिल गर्छौ ।
मणिपूरक स्वाधिष्ठान र मूलाधार
जीवनका प्रत्येक चक्र आˆनो स्थानमा सर्न सक्छ । तर विशेषगरी मणिपूरक बढी गतिशील हुने भएकोले यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहने गर्छ । किनकी यो यस्तो स्थान हो, जसमा शरीरमा रहेको ७२ हजार नाडि एक आपसमा मिल्दछन् र फेरी जोडिने गर्छन् । त्यसैले त, मानिसहरुले आˆनो मणिपूरकलाई अलग अलग किसिमले गति दिन सक्छन् ।
जबकी स्वाधिष्ठान भनेको आत्मा र स्थान हो । यो अवचेतन मनको त्यो स्थान हो जहाँ मानिसको अस्तित्वको प्रारम्भमा गर्भैदेखि जीवन अनुभव र आˆनो छायाँ संग्रहीत रहन्छ ।
मुलधारले हाम्रो सबै कर्मको भण्डारण गर्छ भने स्वाधिष्ठानले यसलाई सकि्रय तुल्याउँछ । स्वाधिष्ठानले जागृति स्पष्टता र व्यक्तित्वको विकास गर्छ ।
त्यस्तै, मुलधारको सम्बन्ध अचेतन मनसित हुन्छ जहाँ पहिलेको जीवनको कर्म र अनुभव संग्रहित हुन्छ ।र यसले नै हाम्रो भावी प्रारम्ध निर्धारण गर्छ । र, यो मानिसको व्यक्तित्व विकासको जग पनि हो । यसले मानिसमा स्फूर्ति, उत्साहको प्रवाह गर्नुका साथै व्यक्तित्वको विकास गर्छ ।
अप्रेसन गरेका बिरामीले प्रोटिन युक्त खाना किन खानुपर्छ ? कारण यस्तो
स्वस्थ्य रहनका लागि आफ्ना पार्टनरलाई कसरी प्रेरित गर्ने ?
बच्चामा जन्मजात हुनसक्छ यी ३ गम्भिर रोग, यस्तो छ कारण र उपचार
होसियार ! उभिएर खानेकुरा खानुहुन्छ ?